को हुन् गुल्मीका अर्याल जो जापानको सडकमा धुरुधुरु रुदै थिए ? – Gulminews
Home/प्रवास/को हुन् गुल्मीका अर्याल जो जापानको सडकमा धुरुधुरु रुदै थिए ?
को हुन् गुल्मीका अर्याल जो जापानको सडकमा धुरुधुरु रुदै थिए ?
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ पुष २, आईतवार १७:१३ मा प्रकाशित
जापान, २ पुस । घर गुल्मी बताउने शालिकराम अर्याल नामका एक व्यक्ति जापानमा टोकियोको सडकमा रुदै बसिरहेको अवस्थामा भेटिएका छन ।
मानसिक रुपमा विक्षिप्त उनी टोकिएको सडकमा टाउकोमा हात राखेर रोईरहेका थिए । धन कमाउने ठुलो सपना बोकेर जापान पुगेका उनलाई एनआरएन जापानका केन्द्रिय सदस्य राजन पौडेलले सडकमा भेटाएका थिए । पौडेलकै पहलमा उनलाई Matsuzawa मानसिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।
अहिले उनको जापान सरकारद्धारा निशुल्क उपचार हुँदै छ । अर्याललाई घर कहाँ हो भनी सोध्दा घरी पाल्पा त घरी गुल्मी बताउँछन । पाल्पा समाजका सदस्यहरुले उनको नेपाल घरको बारेमा बुझ्दा उनको घर गुल्मीको मालिका गाउँपालिका भन्ने मात्र खुलेको बताईएको छ ।